Ny fianakavian'i Google Nexus dia afaka nanohy niaina | Vaovao momba ny gadget
Afaka miaina hatrany ny fianakavian'i Nexus Google
Nandritra ny volana maromaro, ny ankamaroan'ny haino aman-jery dia nanaiky an'izany saika nanjavona tanteraka ny faritra Nexus, satria ny orinasan'ny Mountain View dia hifidy fianakaviana vaovao izay efa ampiasainy ao amin'ny Chromebook antsoina hoe Pixel, ireo fantsona novokarin'ny mpanamboatra HTC ary hivoaka amin'ny 4 Oktobra. Saingy toa tsy izany no izy, hoy ny sioka navoakan'ny iray amin'ireo tonian-dahatsoratry ny 9to5Google izay nambarany fa tsy maty i Nexus, nefa tsy nanolotra vaovao misimisy momba izany, fa niteraka fanontaniana maromaro.
Ny fianakaviana Nexus dia niavaka foana tamin'ny alàlan'ny fanolorana amin'ny vidiny mirary, na dia tsy maodely tamin'ny taon-dasa aza, terminal eo afovoany ambony. Saingy amin'ny fahatongavan'i Pixel sy Pixel XL, izay fantatsika tsara ny toetrany rehetra andro talohan'ny nanoloran'ny orinasa azy ireo, Google dia toa izany te hiditra amin'ny tsena avo lenta mifaninana izay misy an'i Samsung sy Apple ihany. Angamba ny Pixel no avo indrindra an'i Google raha Nexus kosa dia hijanona ho eo afovoany ambony.
Angamba ny hevitra Google momba ny fanamboarana ny fitaovany manokana dia hialoha a antokom-pinoana vaovao hanandrana hanavaka ny faritry ny Nexus, ara-toekarena amin'ny fahombiazana tsara, avy amin'ny faritra avo lenta, Pixel, somary lafo kokoa noho ny faritra Nexus fa manolotra fantsona misy famaritana tena tsara. Amin'izany fomba izany ary miankina amin'ny mpamokatra hafa, ny orinasa dia manomana ny làlana ho amin'ny taona ho avy hanombohana ny famolavolana sy ny fanamboarana ny fitaovany manokana, fikasana iray izay tsy mbola nohamafisin'ny Google na oviana na oviana, fa toa izany no fomba hanaraka ny fanombohana ny maodely ho avy ny orinasa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » telephony » Finday » Afaka miaina hatrany ny fianakavian'i Nexus Google
Ahoana ny fomba hanarahana ny fandefasana ireo fitaovanao nividy tany Shina
WhatsApp, raha tsy ekenay ny fepetra fampiasana, tsy afaka manohy mampiasa ilay rindranasa ianao